Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Auzaar Ee Maanta Oo Kale La Daawaday (+Video) – Filimside.net
Auzaar waxaa wada jilen Salman Khan, Sanjay Kapoor iyo Shilpa Shetty ayago xidigo kale ay kula weheliyaan waxaana Director ka ah Sohail Khan.
28 Feb sanadkii 1997 ayaa mashrucan la daawaday balse waa mid guul darestay maadama lacaga kooxa cajaladaha ku iibsaden uu dib ugu soo celin waayey, hadaba waxaan idiin heynaa filmkaan iyo xaqiiqadii laga diiwan galiyay.
Halkaan Kaga BogoAuzaar Xaqiiqooyin U Gaar Ah:
Xaqiiqada 1aad: Waa filmkii ugu horeyay ee Sohail Khan Director ka noqdo misane la daawado
Xaqiiqada 2aad: waa filmka kaliya ee abid iskala soo muuqden Salman Khan iyo Sanjay Kapoor
Xaqiiqada 3aad: Kajol ayaa loo bandhigay inee atirisho ka noqoto filmkan balse wey iska diiday xidigtaan maadama doorkas uu qancin waayey.
Xaqiiqada 4aad: Aamir Khan iyo Sunny Deol ayaa xiliyo kala duwan loo bandhigay doorka Sanjay Kapoor filmkaan kujilay balse markii dambe Sanjay ayaa calaf u yeeshtay maadama xidigahas ka cudur daarten doorkas.
Xaqiiqada 5aad: Sanjay Dutt ayaa sheegay in loo bandhigay doorka Sanjay Kapoor ee filmkaan balse waxuu u diiday xidigaan Filmka Daud ee 1998 la daawaday ayuu duubis ku waday.
Xaqiiqada 6aad: Jilaa Nirmal Pandey ayaa markii ugu horeysay door wacan laga siiyay filmkaan maadama markii hore doorar yar yar ku shaqeysan jiray sido kalena waa filmkisa kowaad ee India oo dhan laga daawado.
Xaqiiqada 7aad: Waa markii ugu horeysay oo ay wada shaqeyaan Salman Khan iyo Shilpa Shetty waxii mashruucan ka dambeyayna wada shaqeyn kale ayaa dhexmartay xidigahan.
Xaqiiqada 8aad: Heesaha Filmkaan aad aye u gadmeen oona loola dhacay waliba heeska “Tujhse Khaas Fursar Mein” oo aad loo jeclaan jiray ayadoo ay ku luuqeyeen Kumar Sanu, Udit Narayaan iyo Alka Yagnik.
Halkaan Ka Daawo Heeska Ugu Caansan Filmka Auzaar: